Waxay ka warbixiyaan dhibaatooyinka uumiga qaar ka mid ah AirPods Max | Waxaan ka socdaa mac
Dhawaan waxaan ku jirnaa suuqa cusub ee AirPods Max, Kuwa sameecadaha dhagaha leh ee ka socda shirkadda Californian oo leh qiimo layaableh, sida ay layaabkoodu ula yaabeen Qeybaha qaar ayaa bixinaya dhibaatooyin iyadoo la joojinayo buuqa oo hadda qaar ka mid ah adeegsadayaasha ayaa lagu yaqaan inay digtoonaadaan dhibaatooyinka uumiga gudaha gudaha sameecadaha.
Sida had iyo jeer marka aaladaha cusub la sii daayo, waa inaan sugnaa dhowr maalmood si loo ogaado haddii ay si sax ah u shaqeeyaan. Taasi waa sababta had iyo jeer way wanaagsan tahay inaad waxyar sugto ka hor intaadan iibsan waxa ugu horreeya ee soo baxa. In kasta oo ay run tahay in iibsadayaashaas la'aanteed, ma arki lahayn guul darrooyinka suurtagalka ah.
Qaar ka mid ah kuwa iibsadayaasha hore waxay ka warbixinayaan arrimaha uumiga ee AirPods Max earbuds. Faallooyinka ugu horreeya ee ku saabsan dhibaatadan loo maleynayo, asal ahaan ka soo jeeda twitter (Horay ayey caan u ahayd shabakadan bulsheed inay noqoto mid diirada saareysa qaadashada, xanta iyo kuwa kale).
Uumiga guud ahaan wuxuu dhacaa marka shay qabow ku dhow yahay hawo diirran, qoyan, taasna waxay umuuqataa waxa ku dhacaya xaaladaha qaarkood milkiilayaasha AirPods Max. Sameecadaha dhagaha sare ee Apple badanaa waxaa laga sameeyaa bir, (waxaa jira dahab saafi ah) halkan waxay u badan tahay inay qaboobaan ku filan uumiga inuu dhaco. Gaar ahaan haddii loo isticmaalo isboortiga iyo dhididka isticmaalaha.
Dadka qaar waxay xuseen inay la kulmeen dhibaatada, dhowr qof ayaa ka warbixiyay taas u fiirso dhibcaha biyaha ee gudaha sameecadaha.
Marka, uhh… my AirPods Max ayaa sameeya uumiga isticmaalka dheeraadka ah kadib. Weligood looma adeegsan bey'ad qoyan oo kasta. Biyaha ayaa gudaha u gala darawalada waxayna sababeen dhibaatooyin maqal maqal. Waxaan ku labisnaa iyaga oo fadhiya miiska inta badan, wax waalan ma jiraan. Super ku saabsan arrinta pic.twitter.com/0pWicvxLv9
- Donald Filimon (@donaldfilimon) December 27, 2020
Sida lagu arki karo sawirrada ku jira tweet-kaan, jiritaanka dhibicyadan biyaha ahi way muuqdaan oo sidaas awgeed uumiga
Weli garan mayno inay dhibaato guud tahay sidaa darteed Apple waa inay ku baraarugtaa. Laakiin dabcan waa dhibaato iyo qalab Apple ah in aysan ku dhicin oo ka yaraato tayada la maleynayo. Aan sugno si aan u aragno waxa ay shirkaddu leedahay iyo xalalka ay bixiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ka warbixi arrimaha uumiga qaar ka mid ah AirPods Max
Waad salaaman tihiin, waxaan soo iibsaday 18/12/2020. Oo waxaan gartay in uumiga uu ka hoos baxo suufka sidoo kale. Waan hubiyey ka dib markii aan fuushanaa 45 daqiiqo. Taasina waa qabow sidaa darteed waxaan u maleeyay waxa dhici doona marka guga ama xagaagu yimaado. Waa dhibaato naqshadeynta suufka aan isleeyahay. Waxaan la hadlay tufaaxa waxna kuma soo kordhinayaan. Marka waan soo celinayaa. Hadday maalin uun xalliyaan, mar labaad ayaan iibsan lahaa.
Jawaab Ángel González
Apple Pay waxay gaareysaa dhammaan tareenka dhulka hoostiisa mara ee New York iyo shabakadda basaska
Sanadka M1 ee Macs